नेपालका हरेक निर्वाचन ऐतिहासिक – News Portal of Global Nepali
8:03 AM | 1:48 PM
नेपालका हरेक निर्वाचन ऐतिहासिक
15/06/2017 मा प्रकाशित
नीरा भगत थारु
नेपालका निर्वाचनहरु मलाई लाग्छ हरेक निर्वाचनलाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भनेर प्रचार गरिएको हुन्छ । हुन पनि हो– कहिले यो व्यवस्थाको पहिलो निर्वाचन भनिन्छ, अनि कहिले अन्तिम निर्वाचन हुन्छ । जुन मुलुकमा २० वर्षमा एक पटक निर्वाचन हुन्छ भने हरेक निर्वाचन आफैमा पनि ऐतिहासिक हुन्छ । जुन व्यक्ति अघिल्लो निर्वाचनमा आमाको काखको दुधेबालक थियो, अर्काे निर्वाचन आउँदा उ मेयरको उम्मेदवार हुन्छ भने त्यो निर्वाचन ऐतिहासिक नभएर के हो त ? संसारमा कुनै यस्तो मुलुक छैन जहाँ पहिलो निर्वाचन ताका जन्मिएको व्यक्ति दोस्रो निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार हुने सौभाग्य पाओस् । तर, हाम्रो नेपालका गौरव शाली पार्टीको महान क्रान्तिकारी कामबाट मात्र यस्तो सम्भव भएको हो । त्यसकारण नेपाली जनताले यस्तो सौभाग्यको लागि नतमस्तक हुनैपर्छ ।
हाम्रा निर्वाचनका विशेषता हेर्नुस (२००७ मा प्रजातन्त्र लाएर, २०१५ सम्ममा बल्लतल्ल निर्वाचन हुन्छ, त्यो ऐतिहासिक हुने नै भयो । जुन निर्वाचित संसदलाई भंग गरेर जनप्रतिनिधि मनोनित गरिन्छ त्यो पनि ऐतिहासिक । अनि राजाले लेखेको २०१९ को संविधान (राजाले ऋषिकेश शाहका फुटनोट सारे होलान, दिन त मैले दिए संविधान भन्छन् राजा) मा इच्छाएका केही प्रजा उम्मेदवार हुन पाउने ऐतिहासिक निर्वाचन । यस्तो कुनै मुलुकमा नहुने स्वतः प्रष्ट नै छ । ऐतिहासिक जनमत संग्रहको निर्वाचन रे, जनताको प्रतिनिधिलाई, हठात भंग गर्दा जनमत संग्रह गर्नु नपर्ने, आफूले हठात लिएको अधिकार फिर्ता नगरी छलछाम गरेको कुरा चाहि राजाको महान् एतिहासिक कदम रे, लौ त्यो पनि ऐतिहासिक नै भयो । जनमत संग्रहपछिको पहिलो निर्वाचन ऐतिहासिक रे, पंचायती व्यवस्थाको अन्तिम चुनाव पनि ऐतिहासिक रे, बहुदलीय व्यवस्थाको प्रारम्भ पछिको पहिलो निर्वाचन ऐतिहासिक भएछ । आफ्नो पूर्ण बहुमत भएको संसद भंग गरेर सनकको भरमा अर्काे निर्वाचन गराउनु झन ऐतिहासिक भयो । आफ्नो खुट्टामा आफैले बञ्चरो हान्ने संसारमा यस्ता महान नेता कुनै देशमा भेट्टिन्छ ? ६९ जना सभासद भएको विपक्षी दलले हाच्छुय गर्दा ३६ र ७४ रे बन्न रुचाउने महान् सभासद भाग्यमानी देशका जनताबाहेक अरु कसले पाउन सक्छन् ? आफ्नो बहुमत आफैले गुमाई प्रतिपक्षलाई सत्तारुढ बनाउने उदार निर्वाचन संसारका कुनै प्रतिपक्षले पाउँछन् ? नेपालमा ऐतिहासिक निर्वाचन हुन्छ, त्यसकारण यहाँ पाइन्छ । अब बहुदलीय व्यवस्थाको अन्तिम निर्वाचन ऐतिहासिक नहुने कुरै भएन नि ।
हेर्नुस न नेपालमा कि २० औं वर्षसम्म निर्वाचन नै हँुदैन भएपछि ऐतिहासिक मात्र हुन्छ । हुन पनि हो राजनैतिक, सामाजिक, आवधिक निर्वाचन त जहाँ पनि हुन्छ त्यस्ता निर्वाचन के निर्वाचन ? नेपालमा जो हुन्छ नि निर्वाचन त्यो केवल ऐतिहासिक मात्र हुन्छ । जो विश्वका कुनै देशले कुनै जिन्दगीमा गर्नु त के कुरा सोच्न पनि सक्दैनन् हामी त्यस्ता निर्वाचन गर्न सिपालु छौं, हामी जो ऐतिहासिक हौ । पल्लो डाँडामा हलो जोत्दै गरेका व्यक्तिलाई ओल्लो डाँडाकोले करायो ….ए फलानो ! रेडियाले भनेको त सांसद भइस रे, गोरु फुकाएर छिटो आइज फुलमाला र अविर घस्न । पहिले त पत्याएन पछि त जस्को रेडियाले पनि त्यही फलाक्छ कुरा बुझ्न सदरमुकाम जाँदा हो र छ । तिम्रा मान्छे यति जना सासद बनाउ, हाम्रा मान्छे यति जना बनाउ, उस्का यति, उसका पनि यति भनेपछि गोरे गोरे मिलेर खाउ खोले भएछ । कस्तो ऐतिहासिक निर्वाचन हेर्नुस त ? सुत्दा गोठालो, बिहान उठ्दा सांसद । यस्तो जादु त नवराजले लावण्य देशको राजा हुँदा पनि भएको थिएन । ऐतिहासिक रुपले सम्पूर्ण सभासद मनोनित । कस्तो ऐतिहासिक कुनै देशको कुनै नागरिकले गर्न सक्छ ? हामीले यस्ता छलाङ मार्ने महान नेतावाट गौरवपूर्ण इतिहासमा पाएका छौं ।
ऐतिहासिक निर्वाचनको श्रृङ्खला हामी टुटन दिने छैनौ । हाम्रो विशेषता नै ऐतिहासिक छ त्यो कसरी छोड्नु ? संविधान सभाबाट जनताका प्रतिनिधिवाट संविधान लेख्ने र यसका लागि ऐतिहासिक निर्वाचन गराउने । निर्वाचन पनि भयो ढिलो चाडो जसरी भए पनि । ओ हो ! त्यो निर्वाचन झन ऐतिहासिक किनकि सभासदलाई के हो संविधान, किन लेख्ने, के लेख्ने ? कहाँ लेख्ने ? कसरी लेख्ने ? बेकारको माथापचिस किन गर्नु ? राम्रो उपाय निकालियो २–३ जना नेताले आफै राज्य बाढ्दै हिड्ने अनि ताली वजाउँ भनेपछि बाँकीले ताली बजाउने । २–४ पटक ताली के बजाएका थिए सांसदले ऐतिहासिक सदनको म्याद पो सकियो । अरु औषधि हो र म्याद सकिने ? सासदको कही म्याद सकिन्छ ? हलो जोती रहेको मान्छे एकाएक सासद हुने, २ वर्षलाई भएको सभासद सांसद ४ वर्ष हुन के आपत्ति ? ऐतिहासिक रुपमा म्याद थपियो तै पनि भ्यागुताको धार्नी पुगेन । ४ वर्ष मिलिक्कै सकियो । अब के गर्ने ? अरु २-४ वर्ष थपौ न हो भनेको, लाज हुन्छ कि भन्न थाले आम जनताले । विदेशमा आधा लुगा लगाएर समुन्द्रमा हिडदा लाज नहुने यहाँ पूरा लुगा लगाएर ऐतिहासिक सभामा जाँदा लाज हुन्छ ? के गर्नु सर्वाेच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसलावाट म्याद थप्न हुदैन भनेको हुँदा निर्वाचन पुनः गर्नु प¥यो । यो झन कम ऐतिहासिक हो ? पहिलो पटक जनता सँग २ वर्षलाई अनुमति माग्नेपछि आफु खुशी म्याद थप्ने र थपिएको म्यादमै काम नै नगरी अन्त्य हुने, यस्तो कसैले कुनै राज्यले गर्न सक्छ ? हामीले सक्यौ, किनकी हामीसँग ऐतिहासिक धरोहरयुक्त नेतागण जो हुनुहुन्छ । भत्केको धरहरा बनाउन नसकेर के भयो त ? हाम्रै नेतै धरोहर भएपछि ज्यानमारा धरहरा किन बनाउने वेकारमा टण्टा नै साफ !
संसारमा कसैले गर्न नसकेको ऐतिहासिक दोस्रो पटक संविधान सभाको महान निर्वाचन हामीले ग¥यो । हाम्रो यो ऐतिहासिक निर्वाचनवाट ऐतिहासिक महान ६०१ सभासद बनायौ । हामी गरीव भएको जम्मा जम्मी पैसा नभएर न हो ? सासदमा हामी गरिव छौ र ? अमेरिकाले ६०१ सासद वनाउन सक्छ ? बेलायतको हिम्मत छ ? भारतको हामी कुरै गर्दैनम्, जापानले जति विकास गरोस न ६०१ सासद त बनाउन सक्ने होइन क्यारे ? हामीले बनायौ सांसद । हाम्रो निर्वाचन जो छ नि त्यो चाहिँ ऐतिहासिक छ क्या । साँची गिनिज बुक जो छ नि त्यसलाई हाम्रो ऐतिहासिक निर्वाचनको महिमा थाहा रै न छ । त्यसलाई के थाहा ? त्यो मकवानपुर जिल्लामा जन्मेर रुपचन्द्र विष्टको चेला भए पो थाहा पाउथ्यो त ? नत्र कहिँ नभएको निर्वाचन नेपालमा हुने र हरेक निर्वाचन ऐतिहासिक र हरेक इतिहासमा हाम्रो निर्वाचन हुने कुरा थाहा पाउनु पर्दैन थियो त ?
लौ हाम्रो देशमा ऐतिहासिक गाउँपालिकाको चुनाव किस्ताबन्दीमा भइरहेको छ । यसअघि कहिले गाउँपालिका थियो ? थिएन । अव फेरि चुनाव हुन्छ त गाउँपालिकाको ? खै फेरि अब कुन इतिहासमा के पालिका हुन्छ, हुन्छ ? महिषपालिका, गौपालिका, बाख्रापालिक कसलाई के थाहा कहिले ऐतिहासिक निर्वाचन हुन्छ ? अर्काे निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार हुने मान्छेले विचारा अहिले सम्म यो धर्तिमा टेक्न पाएको छ कि छैन के थाहा ? चुनावको हतारो मात्र गरेर हुन्छ त ? मान्छे जन्मिन पाउनु पर्दैन, ऐतिहासिक निर्वाचनमा ? हामी हरेक दिन ऐतिहासिक हुन्छौ., हामी हरेक मान्छे ऐतिहासिक छौ., हाम्रा हरेक काम ऐतिहासिक हुन्छ । हामी अनुहार हेरेर मान्छेको दाम कति भन्ने तोक्छौं । फलानोको टाउकोको पचास लाख, फलानोको पच्चिस लाख, फलानोको दस लाख टाउको ल्याउ पैसा लैजाउ, यस्तो कुनै देशमा हुन्छ ? हुदैन हो हुदैन । उनीहरु ऐतिहासिक हुन र ?
उनीहरु ऐतिहासिक निर्वाचन गर्ने साहस हुन्छ ? हुदैन, विदेशीहरु डर छेरुवा हरेक छ÷छ वर्षमै चुनाव गराउने । अर्काे ऐतिहासिक काम पनि यही ऐतिहासिक चुनावले गरायो । बाघ र बाख्रा एउटै खोरमा कुनै देशमा बस्छन् ? कहाँ सक्नु र १ तर यहाँ त टाउकोको दाम तोक्ने र दाम तोकी माग्ने एउटै खोर मात्रै हो र ? मन पेट मै बस्छन् । यस्तो अरुले सक्दैनन् किन भने त्यहाँ ऐतिहासिक निर्वाचन नै हुदैन । हाम्रो ऐतिहासिक निर्वाचनको महिमा ऐतिहासिक छ भन्ने मेरो ऐतिहासिक कलम पनि बन्द भयो ।
१६८७७	पटक पढिएको
११९३९	पटक पढिएको
१०७८७	पटक पढिएको
९९४१	पटक पढिएको